Myanmar Monk Student Association: January 2011
ဂီရိမုန်တိုင်း ၃ လပြည့် အောက်မေ့ဖွယ် ဆီမီးထွန်းပွဲ ကျင်းပမည်
ဧရာဝတီ Friday, 21 January 2011 18:05 သတင်းတိုများ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဂီရိ ဆိုင်ကလုန်း ၃ လပြည့်မည့် မနက်ဖြန်တွင် လေဘေးဒုက္ခသည် များအတွက် အောက်မေ့ ဖွယ် ဆီမီးထွန်း ပွဲတော်ကို ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးရှိ မြို့နယ် များ၊ ရန်ကုန်ရှိ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် အဝေးရောက် ရခိုင်လူငယ် များက ပြုလုပ်သွား ကြမည်ဟု သိရသည်။ ၂ လ ပြည့် မြောက် သော ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ် ၏ မြို့နယ်တချို့၌ ကျင်းပခဲ့သေးသည်။ ဂီရိမုန်တိုင်းသည် အောက် တိုဘာလ၂၂ ရက်နေ့တွင် တိုက်ခတ်ခဲ့ရာ လူပေါင်း၂ သိန်း ကျော် အိုးအိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ လခြမ်းမြီ on Friday, 21 January 2011
မကိုင်ရဲဘဲ အမြဲ ကြောက်ရွံ့စိတ် ရှိနေခြင်း။ ၇ မျိုး ၇ှိသည်။
၂၀။ မိမိ၏ အချိန်နှင့် အားများ ဆုတ်ယုတ်ပျက်ပြားမှူ့ ဖြစ်စေခြင်း၊
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ဘဝလမ်းညွန် |
၃။ အခြားသူများ၏ အရေးအခင်းများတွင် ၀င်ရောက် စွက်ဖက် တတ်သော ထူးဆန်းသည့်
၆။ မိမိ၏ တိုးတက်ရေးနှင့် အခွင့်အလမ်းများ အပေါ် အရေးမစိုက်ခြင်း၊ စိတ်
၀င်စားမှူ့ မထားခြင်း ။
၇။ အလယ် အလတ် တန်းစား အဆင့်ထက် ကျော်လွန်၍ ရောက်ရှိရန် မှန်းဆသော
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ လခြမ်းမြီ on Wednesday, 19 January 2011
တနေ့မှာ ကျောင်းနေတဲ့အခိုက် ကျောင်းစရိုက်ကာမိအောင် လူသုံးပစ္စည်းတွေ တစ်အိမ်တက်တစ်အိမ်ဆင်းလိုက်လံရောင်းချနေတဲ့ ဆင်းရဲသားကောင်းလေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့မှာ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဆယ်ဆင့်တန် တစ်စေ့မဲ ကျန်တောတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ ပြီးတော သူသိပ်ကို ဆာလောင်နေပါတယ်။ နောက်တစ်အိမ်ရောက်ရင် စားစရာလေးတစ်ခုတစ်လေ တောင်းစားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လှပငယ်ရွယ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် တံခါးလာဖွင့်ပြီး သူကိုကြိုဆိုတဲ့အခါ ကောင်းလေးက ရှက်ရွံသွားပါတယ်။ ဒါကြောင်း ကောင်လေး စားစရာတောင်းမဲ့အစား ရေတစ်ခွက်ပဲ တောင်းလိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးကတော ကောင်းလေးကို ကြည့်ရတာ သိပ်ဆာနေတယ်လို့ ယူဆရတာကြောင်း နို့တွေကို ဖန်ခွက်ကြီးကြီးတစ်ခုထဲထည့်ပြီး ယူလာပေးပါတယ်။ ဆာလောင်နေတဲ့ကောင်းလေးဟာ နို့ဖန်ခွက်ကြီးကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းသောက်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျနော် အစ်မဆီမှာ အကြွေးဘယ်လောက်တင်သွားပြီးလဲ …လို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ မင်း အစ်မဆီမှာ ဘယ်လောက်မှ အကြွေးမတင်ဘူးကွယ်……လို့ အမျိုးသမီးလေးက ပြန်ပြောပါတယ်။ မေတ္တာစေတနာထားတာကို ငွေကြွေးနဲ့ ဘယ်တောမှ တန်ဖိုးမဖြတ်ဖို့ အမေက သင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော အစ်မကို ကျွန်တော် လိုက်လိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ…လို့ ကောင်းလေးက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဟောင်းဝပ်(ဒ်)ကယ်လီလို့ အမည်ရတဲ့ကောင်းလေး အဲဒီအိမ်က ထွက်ခွါသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ ကောင်းလေးဟာ သူ့ခန္ဓာကို ပိုမိုသန်စွမ်းလာတယ်လို့ ခံစားမိရုံသာမက ….ဘုရားသခင်နဲ့ လူသားတွေအပေါ်ထားရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ယုံကြည်သဒ္ဓါစိတ်ဟာလည်း ခိုင်မာလာတယ်။ ….သူ့ကိုအင်အားပြန်ပြည့်ဝစေတဲ့ နို့ဖန်ခွက်ကို အမျိုးသမီးက ကမ်းပေးတဲ့အခါ ကောင်းလေးဟာ ယူမသောက်တောဘူးလို့ လုပ်တောမလို့ပါပဲ။
နှစ်တွေအများကြီး ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ အဲဒီငယ်ရွယ်တဲ့ အမျိုးသမီးစာ အသေးအသန်နားမကျန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခံ ဆရာဝန်တွေဟာလည်း သူမရဲ့ရောက်ဂါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အကြံအိုက်နေကြပါတယ်။ သူမကို ကယ်တင်ဖို့ သူတို့ဘာမှ လုပ်မပေးနိူင်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးမှာတော ဒေသခံ ဆရာဝန်တွေဟာ အမျိုးသမီးကို မြို့ကြီးဆီ ပို့ကြပါတယ်။ မြို့ရောက်တော သူမရဲ့ ရှားပါးတဲ့ရောဂါကို လေ့လာဖို့ အထူးကူးဆရာဝန်တွေကို ပင့်ဖိတ်လိုက်ပါတယ်….။ အတိုင်ပင်ခံ အကြံရယူဖို့အတွက်တော ဒေါက်တာ ဟောင်းဝပ်(ဒ်)ကယ်လီကို ပင့်ဖိတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးလာခဲ့တဲ့ မြို့နာမည်ကို ကြားရတဲ့အခါ ထူးဆန်းတဲ့ အရိပ်ယောင်တစ်မျိုး ဒေါက်တာကယ်လီရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ ပြည့်လျှမ်းလာပါတယ်……။ ချက်ချင်းပဲ မတ်တတ်ထရပ်ပြီး ဆေးရုံခန်းမကနေ အမျိုးအခန်းကို ဆင်းသွားပါတယ်။ ဆရာဝန်အဝတ်ကို ဝတ်ဆင်ပြီးနောက် အမျိုးသမီးကို တွေ့ဖို့ အခန့်ထဲဝင်သွားလိုက်ပါတယ်။ ဒေါက်တာကယ်လီဟာ အမျိုးသမီးကို ချက်ချင်းမှတ်မိသွားပါတယ်။ သူဟာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခန်းထဲကို ပြန်သွားပြီး အသက်ကို ကယ်တင်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်….။ အဲဒီနေ့ကစပြီး ဒေါက်တာကယ်လီဟာ အမျိုးသမီးရဲ့ရောဂါကို သေသေချာချာကို ဂရုစိုက်ပြီး ကူးသပါတောတယ်။ အချိန်ကြာအောင် ကူးသပြီးတဲ့နောက်မှာ တိုက်ပွဲကို အနိူင်ရသွားပါတောတယ်။ နောက်ဆုံးကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာကို အတည်ပြုချက်ရယူဖို့ရာသူ့ဆီပို့ပေးဖို့ ဒေါက်တာကယ်လီက ဆေးရုံးရဲ့ငွေကြေးဌာနကို မေတ္တညရပ်ခံလိုက်ပါတယ်။ ငွေတောင်းခံလွှာကို ကိုကြည့်လိုက်ပြီး ဘေးနားမှာ တစ်စုံတရာကို ရေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော ငွေတောင်းခံလွှာကို အမျိုးသမီးလေးရဲ့အခန့်ကို ပို့လိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးကတော ငွေတောင်းခံလွှာကို ဖွင့်ဖတ်ဖို့ရာ ထိတ်လန့်နေရှာပါတယ်…….။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော ဒီငွေကိုတောင်းခံလွှာကို ပေးချေဖို့ သူမဘဝရဲ့ကျန်ရှိသမျှစည်းစိမ်းအားလုံး ကုန်တောမှာပဲလို့ သေသေချာချာသိလို့ပါပဲ….။ နောက်ဆုံးမှာတော သူမငွေတောင်းခံလွှာကို ကြည့်လိုက်ပါတယ်…..။ ငွေတောင်းခံလွှာရဲ့ဘေးမှာ ရေးထားတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာကို သူမရဲ့အာရုံကို ဖမ်းစားလိုက်ပါတယ်….။ သူမဖတ်လိုက်ရတဲ့ စာတွေက နို့တစ်ဖန်ခွင့်ဖြင့် အပြည့်အဝ ငွေပေးချေပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဝမ်းသာပီတိကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မျက်ရည်တွေဟာ သူမရဲ့ပါးပြင်ပေါ်ကို လိမ့်ဆင်းလာ
လာပါတယ်….။ နောက်ပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နေတဲ့ နှလုံးသားကနေ သူမဆုတောင်းမိလိုက်တာကတော့ ….အရှင့်ရဲ့မေတ္တာတရား လူသားတွေရဲ့ နှလုံးသားများနဲ့ လက်များမှာ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…..ထာဝရဘုရားသခင်……။
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ လူမှုရေး |
(၁၁) တကယ်လို့ ရုပ်ဆိုးနေတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုတော်အောင် လုပ်ပါ။
မတော်ခဲ့ဘူးဆိုရင် အမြဲပြုံးနေပါ။ ရုပ်ကြောင့် လူကို မမုန်းနိုင်ပါဘူး။
(၁၃) အချို့ကိစ္စမှာ သိရက်နှင့် မေးသင့်သည်။ ဥပမာ.... လက်စွပ်လေးက
သိပ်တန်ဖိုးရှိမှာပဲနော်။ အချို့ကိစ္စမှာ မေးချင်သော်လည်း မမေးသင့်ပေ။
(၁၅) "မ"သိဘူး၊ "မ"လုပ်ဘူး၊ "မ"ရဘူး၊ "မ"တတ်ဘူး ဆိုတဲ့ "မ"နေရာမှာ
"ကြိုးစားကြည့်မယ်" "သိပ်မသေချာဘူး" "အချိန်အနည်းငယ်ပေးပါ"
"ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ အကြောင်းပြန်လိုက်မယ်" လို့ ပြောင်းသုံးကြည့်ပါ။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ( MMSA ) on Monday, 17 January 2011
(၁) လမ်းစကိုတွေ့ပြီဆိုရင် ဘယ်လောက်ဝေးတဲ့ ခရီးပဲဖြစ်ဖြစ် လျှောက်ရမှာ
(၂) သစ်ပင်၏ ဦးတည်ရာကို လေက အဆုံးအဖြတ်ပေး၏။ လူ၏ ဦးတည်ရာကို
(၆) ဘ၀မြင့်ခြင်း၏ နောက်တွင် ကျဆုံးခြင်းရှိသည်။ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်၏
နောက်တွင် ဆုတ်ယုတ်ခြင်း ရှိသည်။ ခေါင်းငုံ့တတ်မှသာ
(၇) ကိုယ့်ကိုဝေဖန်ခြင်းဖြင့် အခြားလူ၏ ယုံကြည်မှုကို ရရှိနိုင်သည်။
ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ် ဖော်ခြင်းက မရနိုင်။
(၉) သူ့နောက်ကွယ်မှာ သူ့ကောင်းကြောင်းကိုပဲ ပြောပါ။ အဲဒီစကား သူ့
နားဆီမရောက်ဘူး ဆိုတာ လုံးဝ စိတ်ချပါ။
အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ဝါဒဖြန့် ကြော်ငြာတဲ့ အကြောင်းကြောင်း အမှားဟာ သစ္စာတရားမဖြစ်လာဘူး။ ဘယ်သူမှ မမြင်တွေနိူင်တာကြောင်း သစ္စတရားဟာလည်း အမှားဖြစ်မလားဘူး။
The error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody will see it.
ပျော်ရွှင်မှုတည်းဟူသော ရေမွေးတစ်စက်နှစ်စက် သင့်ကိုယ်ပေါ်မှာ မရှိဘဲ အခြားသူများတွင် ရေမွေးနဲ့ထုံးခြင်းဟုသော ပျော်ရွင်မှု မဆောင်ရွက်နိူင်ပါ။
သင်သေသောအခါ သင်စုဆောင်းထားခဲ့သော ပစ္စည်းများသည် ထိုအတိုင်းကျန်နေပါလိမ္မည်။ သင်၏မိတ်ဆွေ ဆွေမျိုးများက သင်အား ဂူသင်္ချိင်းအထိ သင့်နောက်ကို လိုက်ပို့ကြပါလိမ္မည်။ သို့သော် သင်ရှိစဉ်က ပြုလုပ်ခဲ့သော ကောင်းမှုနှင့် မကောင်းမှုများသည်သာလျှင်
ဂူသင်္ချိင်းဟိုဘက်အထိ သင်ရှိလိုက်လာကြလိမ္မည်။
ဘယ်ရန်သူများမှ မိမိလောကတတ်မှားမှု အခြေခံသော အတွေးများ၊ မုန်းတီးမှု အခြေခံသော အတွေးများ၊ မနာလိုဝန်တိုမှု အခြေခံသော အတွေးများလောက် မိမိအပေါ် အန္တရယ် မပေးနိူင်ပါ။
No enemy can harm one so much as one’s own thoughts of craving, thoughts of hate, thoughts of jealously and so on.
မေတ္တာတရားဟာ ဘယ်သောအခါမှ တောင်းဆိုမှုမပြု မေတ္တာတရားဟာ အမြဲတမ်းပေးကမ်းမှုပြုတယ်၊ အနစ်နာခံတယ်၊ ဘယ်တောမှ နာကြည်းမှုမရှိဘူး၊ ဘယ်တောမှလည်း တုံပြန်ကလဲစားမချေဘူး။ love never claims it even suffers, never resents, and never revenges itself.
အာရှယဉ်ကျေးမှုတွေ ယိုယွင်းတိမ်းပါးပျက်စီးနေချိန်မှာ အနောက်တိုင်း ပြတိုက်တွေနဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးတွေဟာ အာရှတိုက်က ထုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အနုပညာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေခဲ့တင်မက တလေးတစား တန်ဖို့ထားခဲ့ကြာ အထင်အရှားပါဘဲ။
လောကကြီးကို ပြိုကွဲပျောက်ပျက်မသွားအောင် ထိမ်းကွပ်ပေးထားသည့်အရာမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားပဲဖြစ်သည်။ ထိုကိုယ်ကျင့်တရားခိုင်မာရေးတွက် ချမှတ်ပေးသော လမ်းပြသူဟာလည်း ဘာသာရေးပင်ဖြစ်သည်။
သူသူငှာငှာ အချိန်ကြာလင့် နေချင်ကြလိမ္မည်။
ယှဉ်ပြိုင်မရ သင်္ခါရနှင့်
ထိုင်းနိူင်ငံရောက်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား မြန်မာမိသားစုမှ (MMSA) သို့ ဆန်လှူဒါန်း
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ချင်းမိုင်မြို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား မြန်မာမိသားစုများဖြစ်ကြသော မမီးမီးဦးဆောင်သော ဦးပွန်းမား (ဦးမောင်) ဆန်း (၁) အိတ် နှင့် ကိုမင်းမင်း ဘတ် (၅၀၀) ကိုနှောင်နှောင် ဘတ် (၅၀၀) တို့ စုပေါင်း၍ ချင်းမိုင်မြို့ Mahachulalongkorn တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားနေကြသော မြန်မာ့ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအား ထိုင်းဘတ်ငွေ (၂၆၀၀) နှင့်ညီမျှသော ဆန်း(2) အိတ်နှင့် ဆီများကို ယနေ့ (15 Jan 2011) နေ့တွင် (MMSA) မြန်မာရဟန်းကျောင်းသားများအဖွဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့ လှူဒါန်းလိုက်ပါကြောင်း
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ လခြမ်းမြီ on Saturday, 15 January 2011
ရခိုင်နှင့် ချင်းတွင် အအေးလှိုင်းဖြတ်မည်
မျိုးသန့် | ကြာသပတေးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၃၁ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် စနေနေ့မှစ၍ နှစ်ရက်တာ အအေးလှိုင်းတခု ဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟု မိုးလေဝသပညာရှင် ဦးထွန်းလွင်က ခန့်မှန်းထားသည်။
ပုံမှန်အပူချိန်၏အောက် မာကျူရီပြဒါးတိုင်တွင် ၄ံCမှ ၆ံCလျော့ကျသွားနိုင်သော အအေးလှိုင်းသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို ဝင်ရောက်လာမှာဖြစ်သည်ဟု ဦးထွန်းလွင်က ပြောသည်။
မိုးလေဝသပညာရှင် ဦးထွန်းလွင် (photo:: www.tunlwin.com)
ရခိုင်ပြည်နယ်၏ နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့၏ ယနေ့ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ ၁၈ံC (၆၄.၄ ဖာရင်ဟိုက်) မှ ၂ဝံC (၆၈ ဖာရင်ဟိုက်) အသီးသီးဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းက ဝင်ရောက်ခဲ့သော အအေးလှိုင်းတခုကြောင့် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ္မတူမြို့နယ်နှင့် မူဆယ်ခရိုင်တွင်း လူ ၄ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းတို့တွင် အအေးလှိုင်းကျရောက်မှု ယမန်နေ့အထိ ရှိနေခဲ့ပြီး ကလကတ္တားတွင် ၇ နှစ်တွင်း အအေးဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ ဥတာပရာဒေ့ရှ် ပြည်နယ်တွင် ၁ံC (၃၃.၈၇ ဖာရင်ဟိုက်) သို့ ယမန်နေ့က ရောက်ရှိကာ လူ ၁၃ ဦးသေဆုံးပြီး အအေးလွန်ကဲမှုကြောင့် ယခုဆောင်းတွင်း တခုလုံးတွင် သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၁၃ဝ ခန့်ရှိသွားပြီ ဖြစ်သည်။
တပ်ခ်ျမဟာတည်ရှိရာ အဂ္ဂရာတွင် ၁ံC(၃၃.၈၇ ဖာရင်ဟိုက်) သို့ရောက်ခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွင်လည်း ယမန်နေ့မှစ၍ အအေးလှိုင်းဒဏ် ခံနေရသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ( MMSA ) on Friday, 14 January 2011
စက်မှုလုပ်ငန်း ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲမည်
ဟိန်းသူ Thursday, 13 January 2011 18:07
နိုင်ငံပိုင် စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ယခုနှစ်အတွင်း ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ ဆက်လက်လုပ်ကိုင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်အစိုးရ အမှတ် ၂ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဒု ၀န်ကြီး ဦးခင်မောင်ကျော်က ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်း၏ နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံတွင် ယင်းသို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်း Eleven မီဒီယာက ဖော်ပြသည်။
“ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်အဖြစ် ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံတော် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိကို ပုဂ္ဂလိက ထံ လွှဲပြောင်းပေးမှုတွေ ပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမျိုးက မြန်မာနိုင်ငံတင် မဟုတ်ဘဲ တခြား ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တွေမှာလည်း ဒီလိုမျိုးပဲ ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိပါတယ်''ဟု ဦးခင်မောင်ကျော်က ညီလာခံ၌ ပြောခဲ့သည်။
နိုင်ငံပိုင်များဖြစ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၁၁၀ ၊ အဆောက်အအုံ ၃၂ ခု၊ စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင် ၂၄၆ ဆိုင်နှင့် ရန်ကုန်မြစ်ကမ်း တလျောက်ရှိ အလုံဆိပ်ကမ်းမှ ဗိုလ်တထောင် သံလျက်စွန်းအထိ ဆိပ်ကမ်းမြေနေရာများကို ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းရောင်းချပြီးဖြစ် သည်ဟုလည်း Eleven မီဒီယာ၌ ရေးသား ထားသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းများ အပြင် နိုင်ငံပိုင် မော်တော်ယာဉ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ စက်သုံးဆီဆိုင်များ၊ အဆောက်အအုံများနှင့် မြေကွက် များ၊ လမ်းတံတားများ၊ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် အပန်းဖြေနေရာများကိုပါ ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်းပေးနေသည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်(UMFCCI) မှ တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်သည့် ဦးစိုးမြင့်က “အခုလိုကိစ္စမျိုးတွေ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလည်း ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကျနော်တို့ အကောင်းမြင်ပါတယ်။ ဒါပေ မယ့် အခုအချိန် အထိတော့ အစိုးရကနေ တရားဝင် သတင်း ထုတ်ပြန်တာတော့ မရှိသေးပါဘူး”ဟု ဧရာဝတီ သို့ ပြောသည်။
နိုင်ငံပိုင် သိမ်းဆည်းထားသော ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် အများဆုံးတည်ရှိသည့် တိုက်ခန်း၊ မြေကွက်၊ မြေနှင့် အဆောက် အအုံ စုစုပေါင်း ၁၃၇ ခုကိုရောင်းချရန်နှင့် မန္တလေးအပြင် ပဲခူး၊ ပြည်၊ တာချီလိတ်၊ ပြင်ဦးလွင်၊ မိတ္ထီလာ၊ လားရှိုး၊ သံတွဲ၊ တောင်တွင်းကြီး မြို့များ၌ တည်ရှိသည့် အိမ်ခြံမြေများကို ရောင်းချရန်အတွက်လည်း ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားကာ အဆိုပြုလွှာများတင်သွင်းရန် ကြေညာထားပြီးဖြစ်သည်။
နိုင်ငံပိုင် မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား လက်အောက်ရှိ MRTV3New Studio Complex အဆောက်အအုံနှင့် မြေနေရာအား ရွှေတောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကုမ္ပဏီလိမီတက်ကို ပုဂ္ဂလိကပိုင် အဖြစ်ရောင်းချခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံပိုင် စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အဆောက်အအုံများ၊ စက်ရုံများကို ရောင်းချနေခြင်းမှာ၂၀၀၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှ စတင်ကာ ပိုမိုများပြားလာပြီး စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက အများဆုံးပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရရှိထားသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ လခြမ်းမြီ on Thursday, 13 January 2011
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသားများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ရာစုနှစ်တစ်ခုအလွန်က မည်သို့မျှ ကြံစည်မျှော်လင့်စိတ်ကူး
မထားခဲ့သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု့များကို လက်ဝယ် ပိုင်ပိုင် အောင်မြင်ရရှိခဲ့လေပြီ။ ခေတ်သစ်
နည်းပညာများက အချိန်အဟုန်ပြင်းစွာဖြင့် သဘာဝတရားကို အနိုင်ယူလျှက် ကျွန်ုပ်တို့ဆီကိုရောက်ရှိလို့နေပြီး ၊ .
ထိုခေတ်သစ် နည်းပညာများ၏ အကူအညီများကြောင်း များစွာသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို အောင်မြင်နိုင်သော် လည်း နောက်ဆုံး မေးခွန်းက ကျွန်ုပ်တို့သည် အတိတ်က ဘိုးဘွား ဘီဘင်တို့ ခေတ်က ကဲ့သို ပျော်ရွှင်ကြပါရဲ့လား? အဖြေကတော ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည် ၊ အမျိုးသမီး များနှင့် ခလေးငယ်များအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု့၊ ဘာသာရေးနှင့် လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု့၊ အသားအရောင် နှင့် ဇာတ် ခွဲခြားမှု့တို့က အရှိန်အဟုန်း မလျှော့ဘဲ ဆက်လက် ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။ စင်စစ် ရုပ်ဝတ္တုပိုင်းဆိုင်ရာ သာယာမှု့နောက်သို့ လိုက်ကြ သောသူများသည် ဆင်းရဲသော သူများထက်ပင်ပို၍ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြရ နိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးတွင်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေကြရသော
မှတ်ချက် ။ ဆရာတော်ကေသိရီဓမ္မာနန္ဒ၏ Human life and problems ဆောင်ပါးအားစာရေးသူအမြင်ဖြင့်ဆီလျှော်သလိုဘာသာပြန်ဆို
လွန်ခဲ့သော ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့ ညဉ့် ၁၂ နာရီတွင် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် တောင်ပိုင်း ညောင်ချောင်း ကျေးရွာ အနီးတည်ရှိသော ရခိုင်အမျိုးသားများ နေထိုင်ရာ ကျွဲကော်မော် ကျေးရွာကို မူဆလင် ဓါးပြ ၃၀ ခန့်က သေနတ်များဖြင့် ၀င်ရောက်ကာ ဓါးပြတိုက်သွားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဓါးပြအုပ်စုသည် အဆိုကျေးရွာမှ ဓါးပြတိုက် အပြီး ပြန်အထွက်တွင် ဒိုင်းနက် အမျိုးသားများ နေထိုင်ရာ သိမ်တောင်ပြင် ကျေးရွာအား ထပ်မံ ၀င်ရောက်ပြီး ဓါးပြတိုက်သွားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကျေးရွာတွင် ဓါးပြတိုက်နေစဉ်တွင် ကျေးရွာသားများ ပြန်လည် ခုခံရာမှ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ရာ ကျေးရွာ သိမ်တောင်ပြင်ကျေးရွာ ရယက ဥက္ကဌ ဇနီးတွင် သေနတ် ထိမှန်ပြီး ယနေ့ အချိန်ထိ ဘူးသီးတောင် ဆေးရုံတွင် တင်ထားရကြောင်း သိရသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာကို ဓါးပြတိုက်ပြီး ညောင်ချောင်း နစကစခန်းမှ စခန်းမှူးရောက်လာပြီးတော့ ပါသွားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အမှန်ပြော။ အမှန်မပေးဘဲ ပြောရင် ပစ္စည်းကို ရရင် ပြန်မပေးတော့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ရွာသား တစ်ဦးက ကြောက်ကြောက်လှန့်လှန့် သူအိမ်က ပစ္စည်းတွေကို အမှန် မပြောနိုင်တော့ မျက်နာကို စခန်းမှူးက လက်သီးနဲ့ ပစ်ထိုးပါတယ်။ ခြေထောက်နဲ့ ကျောက်ကန်ပါတယ်။ ခုလို ဓါးပြတိုက်ခံရပီး ကြောက်နေရတဲ့ အချိန်မှာ နစက စခန်းမှူးက လက်သီးနဲ့ ထိုးတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့မှာ ခိုကိုးစရာဆိုလို့ မရှိတော့ပါဘူး” ဟု ကျေးရွာ လူကြီးက ပြောသည်။
ဓါးပြတိုက်ခံရသော သိမ်တောင်ပြင်ကျေးရွာမှာ ညောင်ချောင်း နစက စခန်း အနီးအနားတွင် တည်ရှိပြီး ကျွဲကော်မော် ကျေးရွာမှာ ညောင်ချောင်း နစက စခန်းမှ ခြေလျင် တစ်နာရီခန့် အဝေးတွင် တည်ရှိသည်။
အဆိုပါကျေးရွာများမှာ နယ်စပ်တွင် တည်ရှိသော ကျေးရွာများ မဟုတ်ကြဘဲ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် အတွင်းပိုင်းတွင် တည်ရှိသော ကျေးရွာများ ဖြစ်ကြပြီး မေယူမြစ် အနောက်ဘက် ကမ်းခြေတွင် တည်ရှိသော ကျေးရွာများ ဖြစ်ကြသည်။
ဓါးပြများသည် ကျွဲကော်မော်ကျေးရွာအား ၀ိုင်းရံထားပြီး တစ်အိမ်တက်ဆင်း ဓါးပြတိုက်သွားခြင်း ဖြစ်ပြီး လက်ဝတ်ရတနာ ပစ္စည်း သိန်း ၃၀ ကျပ်ကျော်ဖိုးပါသွားသည်ဟု သိရသည်။ အမျိုးသား တစ်ဦးတွင် ဦးခေါင်းတွင် ဒဏ်ရာ ရရှိသွားပြီး အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို သေနတ်ဘောင်ဖြင့် ၀မ်းဗိုက်ကို ရိုက်နက်သဖြင့် ဆေးရုံ ပို့ပေးခဲ့ရသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ် ဒီဇင်္ဘာလ အတွင်းကလည်း ရသေ့တောင်မြို့နယ် စေတီပြင် ကျေးရွာ အနီးရှိ ချွတ်ပြင် ကျေးရွာအား မူဆလင် ဓါးပြများ ၀င်ရောက် ဓါးပြတိုက်ခိုက်သွားရာ ကျပ် သိန်း ၃၀၀ ဖိုး ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ မူဆလင် ကုလား ဓါးပြများမှာ အုပ်စုဖွဲ့ပြီး မူဆလင် ကျေးရွာများကို ဓါးမရ မတိုက်ဘဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျေးရွာများကို ရွေးပြီး ဓါးမရ တိုက်နေသော်လည်း ဒေသအတွင်းရှိ နစက၊ ရဲနှင့် စစ်တပ်မှ တစုံတရာ ကာကွယ် မပေးနိုင်သဖြင့် ဒေသအတွင်း လူထုမှာ အထူး စိုးရိမ်သောက ပွားလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အခုဓါးမရ တိုက်မူများတွင် နောက်ကွယ်မှ နိုင်ငံရေး ပယောဂ ပါ မပါကို မိမိတို့ မသိရှိကြောင်းနှင့် မူဆလင် ဓါးပြများတွင် အကောင်းစား နောက်ဆုံးပေါ် သေနတ်များ ပါဝင်သည်ဟု ကျေးရွာသားများက ပြောသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ( MMSA ) on Tuesday, 11 January 2011
ထိုင်းနိူင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား မြန်မာမိသားစုမှ (MMSA)သို့ ငွေလှူဒါန်း
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ချင်းမိုင်မြို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား မြန်မာမိသားစုများဖြစ်ကြသော ဦးသိန်းတိုး ဒေါ်ဝင်းဝင်းရီတို့ မိသားစုမှ Mahachulalongkorn တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားနေကြသော မြန်မာ့ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအား ထိုင်းဘတ်ငွေ (၂၆၃၀) တိတိကို ယနေ့ (၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀) နေ့တွင် (MMSA) မြန်မာရဟန်းကျောင်းသားများအဖွဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့
လှူဒါန်းလိုက်ပါ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဂီရိခြေရာကောက်ကြောင်း( ၄ )
အဲဒီအတွက် မတည်ငွေ တသိန်းလှူခဲပြီးတော့ ချက်ချင်းကို ပြန်လာခဲ့ကြတယ် အပြန်မှာတော့ ရေပြည့်ချိန်မို့ ပဲ့ချိတ်ကလေး တစင်းနဲ့ လိုက်ပို့တယ် ညကလဲမှောင်လိုက်တာ ပိန်းပိန်းပိတ်၊ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးအရောင်လေးနဲ့ လာကြရတယ်။ ဆိပ်ကမ်းတံတားမှာစက်လှေခေါင်မိုးကသေးတော့ တခြားစက်လှေကြီးတစီးပေါ် တက်အိပ်ကြရ တယ်။
မနက်လေးနာရီထိုးတော့နိုးပြန်ပီ ဘယ်သူမှတ်လဲ ထီဆရာပဲ.”ထတော့ မနက်လင်းပီ” တဲ့ခရီးဆက်ကြတယ် လမ်းကလဲမသိ ညကလဲမှောင်လမ်းမှာကျောက်ဆောင်တွေလဲပေါ ဆိုတော့လမ်းပြတယောက်အကူညီယူကြရ တယ်။ မနက် (၈) နာရီခွဲလောက်မှာ ပြင်ဝန်းရွာနဲ့ ကိုက် ၃၀၀ ဝေးမယ်ထင်တာပဲ တောင်မော်နားလေးမှာ စက်လှေကဘယ်လိုမှမောင်းလို့မရတော့ဘူး စက်ကိုတင်လေငြိမ်လေစက်လျှော့လိုက်ရင်နောက်ဆုပ်သွားတယ်။ မိနစ် ၃၀ လောက်မောင်းနေလိုက်တာဘာမှ အရာ မထင်ဘူး နောက်တော့ ဦးခင်အေးရဲ့ ညဏ်နီ ညာဏ်နက်နဲ့ စက်လှေကို ဟိုလိုလှည့်လိုက် ဒီလိုလှည့်လိုက် လုပ်ပီး မောင်းမှ တရွေ့ရွေ့လွတ်သွားတယ် အဲဒီတုန်းကသာ လေနည်းနည်းလောက်တိုက်ပီး လိုင်းလေး ပေါ်လိုက်လို့ကတော့ ပြန်တွေးကြည့်ပြီး ပြောဖြစ်ကြသေး ၊ ရွာကိုရောက်တော့ ပစ္စည်းတွေသယ်ဖို့ကိစ္စကို ဦးခင်အေးကိုလွှဲလိုက်ကြပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ သွား ကြတယ် ကျောင်းကတက်လမ်းပိတ်နေတယ်၊ ခေါင်မိုးမှာလဲ အမိုးမရှိဘူး ကြယ်မြင်လမြင်ပဲ ဆရာတော်ကတော့
ဒီသိမ်သာ မရှိခဲ့ရင် အဲဒီနေ့ မိုးနဲ့ လေ အရှိန်ကြောင့် အားလုံး သေသွားနိုင်တယ် လို့ ပြောပြတယ်။ ဆရာတော်ကို ၀တ္ထုလှူပီးတော့ ရွာတပတ်လှည့်ကြည့်ကြတော့ အားလုံးက ပြောင်တလင်းနေတာပဲ၊ တချို့လူတွေကသစ်မရှိလို့ကွမ်းသီပင်တွေကို ခုတ်ညပီးတော့ ကုံးညားတွေ လုပ်နေကြတာ တွေ့တယ်၊အားလုံး ကတော့မြေကြီးပေါ်မှာပဲနေကြတယ်ခလေးတွေကဖုန်အလူးလူးနဲ့ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းလဲတာပေါ်လင်အမိုး နဲ့ပဲ ယာယီလုပ်ထားရတာတွေ့တယ်။ သစ်ပုံတွေ ပေါ်တက်နင်းသွားရတာ သံစူးမှာတောင်ကြောက်ရတယ်။ အဲဒီဒေသမှာတာဝန်ကျတဲ့ မြန်မာ စစ်တပ်အရာရှိ တပ်ရင်းမှူးကို အလှူလာလုပ်ကြောင်း အကြောင်းကြားတော့ လိုအပ်တာတွေနဲ့သူတို့လဲဝိုင်းကူပါကြောင်း၊လာလှူပေးကြတာကောင်းမွန်ပါကြောင်းပြောပြတယ်။ ပိုက်ဆိပ်၊ပြင်ချောင်း၊ပြင်ဝန်းအုပ်စုတခုလုံးအတွက်တနေရာတည်းလူစုလိုက်ပီးတော့လှူကြတယ်။တခွက် ဆွမ်း ယူလာ ကြတဲ့ဟင်းပေါင်းစုံဆွမ်းဝိုင်းကလဲ အဲဒီနေ့လည်အတွက်တော်တော်ပဏာရတယ်။ ဆွမ်းကိစ္စပြီးတော့ လမ်းတလျှောက်နဲ့ မုန်တိုင်းတိုက်တုးက ရထားလိုက်တဲ့ပုံတွေ ရှာလာတာကို ပြတော့ Lep top ကိုဝိုင်းအုံကြည့် ကြတော့ဦးက၀ိန်လေးခမျာအမှောင်နည်းလို့ သင်းပိုင်လေး ကာပီးတော့ ပြရရှာတယ်၊ အဖွါးကြီးတွေကို ဟိုသည် မေးကြည့်တော့ သူတို့ဘ၀မှာ ဒီမုန်တိုင်းလို အခါလွန်မှ ဖြစ်တာ ဆိုးကျိုးများတာ မတွေ့ဖူးဘူးတဲ့ ဘာမှ မကျန်တော့ပါဘူး တဲ့။ တကယ်လဲ ဘာမှ မကျန်တော့ဘူး စက်လှေ အပိုင်းအပြတ်တွေ၊ အိမ်တိုင်ငုတ်တိုတွေ အမှိုက်ပုံတွေပဲ ရှိတယ် တောင်ကြားမြောင်ကြားထဲကို လှိုင်းအဟုန်လေ အဟုန်နဲ့ ပါသွားတဲ့ လှေတွေကတော့ ရေထဲပြန်ရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး ၊ကမ်းနားပေါ်တင်သွားတဲ့စက်လှေအချို့ကိုတော့ ပြန်ပြင်ပြီး ရေချနေကြတာတွေ့ရတယ်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ( MMSA ) on Monday, 10 January 2011
ချင်းမိုင်မြို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား မြန်မာမိသားစုမှ (MMSA)သို့ ငွေလှူဒါန်း
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ချင်းမိုင်မြို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား မြန်မာမိသားစုများဖြစ်ကြသော မစိုး တို့ဦးဆောင်သော ချင်းမိုင်မြို့ (Night Bazaar) ညဈေးအဖွဲ့မှ ၊ Mahachulalongkorn တက္ကသိုလ်
တွင် ပညာသင်ကြားနေကြသော မြန်မာ့ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအား ထိုင်းဘတ်ငွေ (2500) တိတိကို ယနေ့ 7. January.2011 နေ့တွင် (MMSA)မြန်မာရဟန်းကျောင်းသားများအဖွဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့လှူဒါန်းလိုက်ပါကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ( MMSA ) on Friday,7January 2011
ဂီရိခြေရာကောက်ကြောင်း( ၃ )
အပိုးတွေပြင်ကြဆင်ကြတယ်။ ကျောက်ဖြူဆရာတော်ကတော့အလုပ်အများဆုံးပဲမနက်ဆွမ်းတွေစီစဉ်၊ သူ့ ကျောင်းကဆရာလေးတွေကျောင်းသူလေးတွေလည်းညအိပ်ပျက်ကြရတာပေါ့အထူးသဖြင့်ထီဆရာတယောက်အစောကြီးနိုးနေတာကပြဿနာ၊လေးနာရီအိပ်ရာထကြမယ်ပြောထားတာကိုသုံးနာရီလောက်ကတည်းကလာနှိုးတော့ညကလဲခရီးရောက်ရောက်ချင်းမြို့ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တွေတွင်းလမ်းလျှောက်ထားရတာဆွေးနွေးအစီစဉ်ချတာနဲ့ညနက်မှအိပ်ရာဝင်ရတာနဲ့ဆိုတော့အဲဒီမနက်အိပ်ရာထရတာတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်၊ဒါပေမဲ့အလှူ သွားလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အသိလေးကြောင့် တက်ကြွနေတယ်။ စက်လှေဆိပ်ကိုရောက်တော့ စက်လှေကူညီတဲ့ ဦးခင်အေးက အဆင်သင့်စောင့်နေလေတယ်။ သူလဲ မအေးဘူး အစောကြီး ရေစစ်ဆိုတော့ သူ့စက်လှေကို ညကတည်းက ရေနက်နိုင်တဲ့နေရာဆီရွှေ့ထားရတယ် အဲဒါနဲ့ လောင်းသေးသေးလေး တစီးနဲ့ စက်လှေကြီးဆီ သွားကြရတယ်။အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်တော့ကျောက်ဖေါ်ပြီးတော့ခရီးစထွက်ကြတယ်။
မနက်လေနုအေးကချမ်းစိမ့်စိမ့်နဲ့ရခိုင်ပြည်ရဲ့ဆောင်းအရသာကိုခံစားယင်းအတွေးကတော့ဂီရိခြေရာ လေးတွေရှာဖွေတွေးနေမိတယ်…..။ တရွေ့ရွေ့ခုတ်မောင်းနေသောမော်တော်ထက်မှမြင်ရသောမြင်ကွင်း တွေက အားလုံး ပြောင်တလင်းလို့ပဲ ပယ်လင်ပြင်ကြီးထဲဟိုတစုသည်တစုခေါင်းပြုကြည့်နေကြသလိုတောင်တွေအားလုံးဟာအမှိုက်ပုံဖြစ်နေတယ်။ နေရောင်ထွက်လာတော့ မနက်ဆွမ်းစားကြတယ် ပဲဟင်းရည် ငါးခြောက်ကျော်ချက်နဲ့ ဒေသအခေါ် ရွှေထမ်ငးကတော့မြိန်လိုက်တာကမှသတိတရပဲ၊ စားပြီးတော့ကျောက်ဖြူဆရာတော် မမေ့မလျော့သယ်လာတဲ့ tea mix သောက်ကြရပြန်တယ် ၊ “အားလဲနာတယ် ဒါပေမဲ့သောက်လိုက်တော့မယ်” ပြောတော့ ထီဆရာကြီးက သူမျက်မှန်အသာလေးပင့်ပီးကွမ်းသက်တန်း ရင့်သန်တဲ့ သွားဖွေးဖွေးတွေ ပေါ်အောင် ပြုံးယင်း ဘုန်းကြီးတွေက ဒီလိုပဲ တဲ့...သူ့ဆရာ ကျောက်ဖြူဘုန်းကြီး မျက်စောင်းပစ်တော့ သူကတခါ ပြန်ပြောပြန်တယ် “ဒဲ့ပြောရင်လဲ ဒီလိုပဲ”တဲ့အားလုံးပြုံးဖြစ်ကြပါသေးသည်။
၉းနာရီခွဲလောက်မှာပင်လယ်ထဲကတောင်ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပေါ်တက်ပီးစက်လှေဆရာဟင်းသွားဝယ်တော့ခလေးတွေအတွက် သကြားလုံးတွေ ပေးလိုက်ကြတယ် ခလေးတွေ ပျော်ရွှင်ကြတာ အဝေးက လှမ်းမြင်ရတယ် ကျွန်းကပြန်လာတော့ အသီးအနှံနဲ့ကမ္ဘာ့ရှားပါး ရေငါးတမျိုးကို လှူလိုက်ကြတယ် ငွေပေးလို့မရပါဘူး သူတို့က အရှင်ဘုရားတိုကို ရွာပေါ်ကြွပီးဆွမ်းလက်ခံစေချင်ကြတာဘုရားတဲ့ ။ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှာ ကမ်းထောင့်ကြီးကို ရောက်ကြပြီးတော့ဆန်နှင့် ဓနိများအဖို့ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပေးသူ ဦးခင်ထွန်းနှင့်ဇနီးတို့မှ တဆင့်ကျ သင့်ငွေများ ပေးချေပြီး ။ တပ်ရွာသို့ ခရီးဆက်ကြတယ် ရေလမ်းကြောင်းဖြင့် သွားနိုင်ပေမဲ့ တာဘောင်ဆည်ထားတော့ လှေဖြတ်မရဘူးဖြစ်တယ် အဲဒါနဲ့ပဲ ခြေကျင်လျှောက်ခဲ့ကြရတယ် ၂ နာရီလောက် ခရီးကို ရွှံ့တော ဘွတ်တောထဲ ဆင်းလိုက် ရေတွေကူးလိုက် ခရီးဆက်ကြရတယ် ချောင်းလေးတခုတွေ့တော့ လှေသမားကို အော်ခေါ်ယူရတယ် လှေစီးဖို့ ဆင်းရတာ ဘွတ်ထူတော့ အ၀တ်တွေ ကွန်ပျူတာ အိတ်တွေ ငွေထည့်ယူလာတဲ့အိတ်တွေအားလုံးဗွတ်ပေကုန်ပါလေရောချက်ချင်း ရေနဲ့ဆေးတော့ တယောက်ကပြောတယ် ဆွေးသွားလိမ့်မယ်ဒီရေကရေငံနော် တဲ့။နေတော်တော်လေးစောင်းမှရွာထိပ် တောရကျောင်းလေးကို ရောက် ကြတယ်ရွာလူကြီးတချို့ကြိုနေတာတွေ့ရတယ်။သူတို့ကတရွာလုံးမှာရေကန်မရှိတော့ဘူး ရေသောက်လို့မရ တော့ဘူး၊တောကျောင်းလေးကတွင်းငယ်လေးကိုသာမှီခိုနေရကြောင်း ပြောပြကြတယ် သွားကြည့်တော့လဲ တကယ်နောက်နေလိုက်တဲ့ ရေက မြေခဲကို အရေဖျော်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲအဲဒီရေကိုသောက်ကြရတယ်တဲ့…ရင် တော့ မောသွားတာပဲ ရွာကိုဝင်တော့ တီးသံမှုတ်သံလေး ကြားရတာ ဘာလဲလို့မေးတော့ သူတို့ သတင်းမကျွတ်ရသေးဘူးဆရာမကန်တော့ကြရသေးဘူးတဲ့အဲဒါနဲ့ဒီနေ့လုပ်ကြတာလို့ပြောပြကြတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ ရွာထဲက ဖြတ်သွားရတော့ အဲဒီရွာကိုကာထား တဲ့ ရေကာတာကြီးကျိုးပြီး အိမ်တွေ ကြားထဲဝင်တဲ့ရေတွေဟာခုထိကိုမခမ်းသေးပဲရှိနေတာတွေ့ရတယ။ရေပုပ်ကိုလှောင်ထားသလို ဖြစ်နေတဲ့ကြား ထဲမှာ အိမ်တွေကတော့မြင်မကောင်းစရာပဲ။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ( MMSA ) on Thursday,6January 2011
အောင်မြတ်စိုး | ကြာသပတေးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၀၆ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၅၆ မိနစ်
(မဇ္ဈိမ) ။ ။ တရားမဝင် နိုင်ငံခြားသား လုပ်သားများ နေရပ်ပြန်ပို့ရေး ရန်ပုံငွေအဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအပါအဝင် ၃ နိုင်ငံမှ တရားဝင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများထံ ယခုလ ငွေကောက်မည့် အစီအစဉ်ကို ၂ဝ၁၂ မတ်လ ၁ ရက်ကျမှသာ စတင်ကောက်ခံရန် ထိုင်းအစိုးရက ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
တဦးလျှင် ဘတ် ၄ဝဝ နှုန်းဖြင့် မြန်မာ၊ လာအို၊ ဘတ် ၃၅ဝ ဖြင့် ကမ္ဘောဒီးယား ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများထံ ယခုလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ၆ လကြာ ငွေကောက်ရေးကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် ယခုလ ၄ ရက်နေ့လုပ် ထိုင်းဝန်ကြီး အစည်းအဝေး၌ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အစိုးရ အင်တာနက် စာမျက်နှာများတွင် ရေးသားဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
“၄ဝဝ သာ ပေးရတယ်ဆိုပေမယ့် သွားပေးမယ့် စရိတ်နဲ့၊ အလုပ်ပျက်ဦးမှာနဲ့၊ အလုပ်ရှင်က ညည်းညူမှာနဲ့၊ တချို့ဆို အလုပ်ရှင်ပွဲစားဆိုရင် သူတို့က လိုက်လုပ်ပေးမှာ မဟုတ်သလို သူတို့အကျိုးရှိမှ လုပ်ပေးမှာကိုး။ အနည်းဆုံး ၅ဝဝ လောက် ပေးရမယ်။ ဒီလိုဖြစ်သွားတာ အရမ်းပျော်ရွှင်မိတယ်” ဟု ဘန်ကောက်မြို့ရှိ တရားဝင် မြန်မာအလုပ်သမား ကိုကျော်ကိုကိုက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမား ဥပဒေ အခန်း ၂၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃ဝ နှင့် ၃၁ တွင် အဆိုပါ ရန်ပုံငွေကို လုပ်ငန်းရှင်များက မိမိလုပ်ငန်းခွင်ရှိ တရားဝင် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများထံမှ ကောက်ရမည်ဖြစ်ကာ၊ ယင်းငွေကို တရားမဝင် အလုပ်သမားများ ပြန်ပို့ရာတွင် ယခင် အစိုးရဘတ်ဂျက်မှ အသုံးပြုနေသော ခရီးစရိတ်နှင့် နေထိုင်စားသောက်စရိတ်များ နေရာတွင် အစားထိုး အသုံးပြုရန် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။
ယင်း ဥပဒေအရ ရန်ပုံငွေ ကောက်ခံရေး မူလအစီအစဉ်ကိုမူ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနှင့် လာအိုများအတွက် တလ ဘတ် ၄ဝဝ နှုန်းဖြင့် ၆ လစာ ၂၄ဝဝ ဘတ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား များအတွက် တလလျှင် ဘတ်ငွေ ၃၅ဝ နှုန်းဖြင့် ၂၁ဝဝ ကောက်ခံရမည်ဟု လျာထားခဲ့သည်။
သို့သော် ဥပဒေထဲတွင် တရားဝင်လုပ်သားများ နိုင်ငံရင်းသို့ အပြီးပြန်သောအခါ မည်သို့ပြန်ထုတ်ပေးမည်ကို တိကျစွာ ပြဋ္ဌာန်းမထားသဖြင့် အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့များက တောင်းဆိုကန့်ကွက်ခဲ့သလို၊ တရားဝင်များထံမှ ကောက်ခံပြီး တရားမဝင်များ ပြန်ပို့ရာတွင် အသုံးပြုမည်ကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်လ ၁၈ ရက်၊ နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနေ့တွင်လည်း အကြီးအကျယ် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမားဝန်ကြီး ခွန်နာယ်ချလမ်ချား စီအော်န်က ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်ဒေသရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအသင်းနှင့် အစည်းအဝေး၌ ယင်းဥပေဒနှင့်ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်စရာများ ရှိနေသဖြင့် စတင်ကောက်ခံမည့် ရက်ကို ရွှေ့ဆိုင်းမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ထိုင်းသတင်း မသီချွန်က ဖော်ပြခဲ့သေးသည်။
ထိုင်းတွင် ယခု ၃ နိုင်ငံမှ တရားဝင် လုပ်သား တသန်းကျော်ရှိပြီး မြန်မာက ၈၁၂,၉၈၄ ဦးအထိ ရှိကြောင်း နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားအဖွဲ့ IOM ၏ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလထုတ် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသော အလုပ်သမားများ အပါအဝင် တရားမဝင် လုပ်ကိုင်သူပေါင်း ၂ သန်းကျော်ရှိကြောင်း နယူးဇီလန်အခြေစိုက် ပင်လယ်ရပ်ခြား အလုပ်သမား ကူညီရေးအဖွဲ့ UnionAID ကလည်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
“အလုပ်အဆင်ပြေတဲ့ လူတွေမှာတော့ အရေးမကြီးဘူးဆိုပေမယ့် တချို့အလုပ်သမားတွေအတွက်က တအားအခက်အခဲ ရှိတယ်လေ။ ဒီကြားထဲ မြန်မာပြည်က မိသားစုအတွက်က မပို့မဖြစ်တဲ့ အခြေအနေတွေက အများကြီးပါ။ ၂ဝ၁၂ ကို ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်၊ သူတို့အတွက် တလ ၄ဝဝ ဆိုရင်ပဲ မိသားစုနည်းတဲ့ လူတွေအတွက် ထောက်ပံပေးလို့ ရပြီပေါ့” ဟု ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမ မမိုးသူဇာက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဂီရိခြေရာကောက်ကြောင်း( ၂ )
အဲဒီလောက်ရှည်တဲ့ တာဘောင်ကြီးကျိုး သွားလောက် တဲ့အထိထန်တဲ့ လှိုင်းကလဲ...ဘယ်လောက် ပြင်းမလဲ တွေးကြည့်ပေါ့….လယ်ကွင်းတွေ ကြည့်မဆုံးဘူး တွေ့တဲ့ကောက်ရိတ်သူမ တယောက် ကို မေးကြည့်တော့ နွားစားဖို့ရိတ်တာပါ၊လယ်အားလုံးကတော့သုည်းသွားပြီ၊ ဧကပေါင်းအများကြီးပဲ..အဲဒီအနီးနားကဘုန်းတော်ကြီး တပါးကိုမေးကြည့်တော့ အမြင့်(၈)ပေခွဲရှိတဲ့ကျောင်း ရေပ်ါမှာ(၆)လက်မလောက်ပဲ ကျန်တယ် လို့ပြောတယ်.. ဒီရပ်ကွက် မှာ အိမ်ခြေ ဘယ်လောက်ရှိလဲ မေးတော့ ၄၀၀ ကျော်တဲ့……တခြားရပ်ကွက်တွေကော ပါသေးလားဆိုတော့ ဟိုတစ်ဖက် အစွန်ရပ်ကွက်ကလဲ ဒီလိုပဲ တဲ့…..အကူညီတွေ ဘာရလဲ ဆိုတော့ ၊ ဆန် (၆) လုံးရယ်၊ တချို့ တာပေါ်လင် ၆ ပေ၊ ၁၀ ပေ တစရယ်၊ ရေသန့်နည်းနည်းရယ်၊ ဒါပဲ တဲ့ သူတို့တွေ နေတဲ့ အိမ်တွေကြားထဲ ရေအိုင်ကြီးလိုလို ဖြစ်နေတယ် ရေတွေက ဒီလိုပဲလားဆိုတော့ ခုမှ ၀ပ်ကျန်ခဲ့တာ တဲ့…..ဆားငန်ရေတွေ ဆိုတော့ ပုပ်ကုန်ပီ ခေါင်မိုးက မလုံ နေ့ခင်းဆိုပူ၊ ညဆို နှင်းတွေယို၊အဖိုးအို အဖွါးအိုတွေ ဆို ဘယ်လို နေမလဲ……တချက်ကလေး တွေးကြည့်မိတော့..လေပူကို ခပ်ပြင်းပြင်းလေးသာ ရှိုက်မိသွားတယ်….. စကားသံအဖြစ် တော့ ဘာမှ ထွက်မလာဘူး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ဘာမှ မဟုတ်တော့ ဘာမှအဖြေမရဘူး ၊ လိုက်က်ပြပေးတဲ့ ရပ်ကွက်သားတယောက်ကို ပြန်လှည့်ကြည့်မိတော့ အကျီ င်္ ဗလာ ကျင်းနဲ့ သမီးလေးကို ချီကာ အားငယ်နေတဲ့ ညှိုးရော်ရော် မျက်နှာလေးပေါ်မတော့ ကိုယ်ချင်းစာတဲ့ လက်တဖက် ပေါ်လာလို့ အားရှိပုံလေးကိုရေးရေးလေးတွေ့ရပြန်တယ်၊ သမီးလေးကို မုန့်ဝယ်ပေးရင်း သားအဖနှစ်ယောက်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်တော့ပျော်နေလိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့စကားဆိုတော့ရ ပါတယ် ကိစ္စမရှိပါဘူးအကူညီလိုရင်ပဲ ပြောပါ…ဆိုပြီး သူ့ခမျာ ကျေနပ်နေပုံလေး ကို အမှတ်ရမိပါသေးသည်။
တကယ်လှူဖြစ်တော့လဲ ငွေပမာဏသာ များ၍ လက်ခံရသော လူထုအတွက် အလွန်နည်းသော ပမာဏမျှလောက်သာ မိမိတို့ကပေးကမ်းနိုင်သည်။ လိုအပ်ချက်တွေက မေးမကြည့်လိုက်နဲ့ အများကြီးဆိုမှ အများကြီးပါ၊ နဂိုချို့တဲ့ တဲ့ ဘ၀တောင် နာလန်မထသေး၊ ကြမ္မာဆိုးကြီးကထပ်ဝင်၊ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာ တောင်တွေးမရဘူး ၊ ငေးကြည့်နေကြတဲ့ခလေးငယ်တွေရဲ့ မျက်ဝန်းတွေက အထင်တကြီး ဖြစ်လွန်းနေတယ်။ ကင်မရာလဲ မမြင်ဖူးဘူး ထောင်တန် အထပ်လိုက်ကြီးလဲ မမြင်ဖူးဘူး၊သူတို့တွေလဲ ဒီလို လှူနိုင်သူတွေ ဖြစ်ချင်ကြမှာပဲလို့ တွေးမိတော့ ပါဝင်လှူဒါန်းကြတဲ့ အလှူရှင်တွေအားလုံးကို လေးစားမိပါသေးတယ်။
ရင်မောခဲ့ရတဲ့ ခံစားမှုလေး နဲ့ပဲ အဲဒီနေ့ ညမှောင်မှောင်ကြားထဲမယ် ချိုင့်ခွက်တွေပေါ ဒလိမ့်ခေါက်ကွေးများ၊ လဲကျတော့မလားလို့ စိတ်တထင့် ထင့် နဲ့ သူများနိုင်ငံ မီးထိန်ထိန် လင်းနေပုံလေးကို တွေးမိတော့ ပြုံးမိသွားသည်၊မချိပြုံးသာဖြစ်ပါသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ( MMSA ) on Wednesday,5January 2011
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ( MMSA ) on Sunday,2January 2011